Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports 7.10.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.10.0 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တိုက်ရိုက်စီးဂိမ်းကစားခြင်းဗီဒီယိုများ, အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့်သင့် Android ကိရိယာပေါ်မှာမဆို IRL ထုတ်လွှင့် Watch! PS4 အဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံး MMO RPG, မဟာဗျူဟာနှင့် FPS ဂိမ်း stream PC, Xbox One နဲ့ Nintendo ပြောင်းလဲမည်။ Twitch သင် streaming များနှင့်ဂိမ်းချက်တင်သင့်ရဲ့လက်ဖဝါးမှာနေထိုင်ပေးသည်။
သငျသညျဂိမ်းကစား Overwatch ထံမှ Legends ၏လိဂ်မှအရာအားလုံးကို play watch အဖြစ် chat နေထိုင်ကြသည်။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ PUBG ထိပ်တိုက်တွေ့, Minecraft အစည်းအဝေးများ, Hearthstone matchups နှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖီဖာ 18 ရည်မှန်းချက်များ။ multiplayer ဂိမ်းမဟုတ်သင့်ရဲ့အရာ? အနုပညာပို့လိုက်ကြတယ်ထံမှတိရိစ္ဆာန်ဗီဒီယိုများ, သင်စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ဆို IRL အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်လွှ!
Twitch တိုက်ရိုက်လွှနှင့်ဂိမ်းကစားသူ Chat ကို: TOP3အင်္ဂါရပ်များ
1. စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ဂိမ်းကစား Minecraft, Fortnite, PUBG, ဖီဖာ 18, Legends ၏အဖွဲ့ချုပ်နှင့်ပိုပြီးကစား။ stream ထွက်ရှိအကြီးမားဆုံး MMO RPG, အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်း, မဟာဗျူဟာနှင့် FPS ဂိမ်းကနေအကြောင်းအရာ, ဒါမှမဟုတ်လက်သည်း-ကိုက်အီလက်ထရောနစ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက်အခြေချ။
မဆိုဂိမ်းကစားခြင်း, အီလက်ထရောနစ်အားကစားနှင့် IRL ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်း 2. တိုက်ရိုက်ချက်တင်။ သူချင်းဂိမ်းကစားအတူ Hearthstone မဟာဗျူဟာစကားပြောရန်သို့မဟုတ်တိတ်ဆိတ်စွာတိုက်ရိုက်လွှင့်အနုပညာပို့လိုက်ကြတယ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် content ။
3. သင့်ရဲ့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းအကြောင်းအရာထုတ်လွှင့်! Xbox One တွင်ပေါ်တွင်သင်၏ Overwatch killstreak တိုက်ရိုက်လွှ, Nintendo ပြောင်းလဲမည်အပေါ် Minecraft monoliths တည်ဆောက်, PS4 ပေါ်တွင်သင်၏ Fortnite ရန်သူများကိုဆင်းယူ, သို့မဟုတ် PC ပေါ်တွင်သင်၏ Hearthstone ကတ်များကိုချွတ်ပြပါ!
Twitch သင်သည်ဂိမ်းကစားနေအောက်မှာမဆိုတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် multiplayer ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားကြည့်ရှုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်လိုအားအပေါ် PUBG, ဖီဖာ 18, Legends ၏အဖွဲ့ချုပ်, Overwatch နှင့် Fortnite ဗီဒီယိုများနှင့်အတူသင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားအလံပျံသန်းပါစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းသို့မဟုတ် MMO RPG အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့တိုက်ရိုက်ချက်တင် Join!
+ PS4, Xbox One မှာ, ကို Nintendo Switch နဲ့ PC တို့အတွက်သီးသန့်အကြောင်းအရာနှင့်အတူအပြန်အလှန်တိုက်ရိုက်သတင်းဗီဒီယိုတွေကိုစီးဆင်းစေ။
အနုပညာပို့လိုက်ကြတယ် မှစ. , အီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ရပ်များမှ, ဂီတပွဲတော်များမှတိုက်ရိုက်စီးဘာမှ: + ထူးခြားတဲ့ programming ကို Watch!
+ ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိအညွှန်းမှလွယ်ကူခြင်းကျေးဇူးတင်စကားနှင့်အတူ multiplayer ဂိမ်းများနှင့် IRL ဗီဒီယိုများသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
+ သူတို့အားနှောင်းပိုင်းတွင်ညဥ့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဂိမ်း chat sessions များအတွက်အမှောင် Mode ကိုပြောင်းပါ။
သူတို့နှစ်သက်သောအွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းသို့မဟုတ် FPS ဂိမ်းကျော်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့နေရာတွေ့ပြီသူအမာခံသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းကစား join ။ Twitch နှင့်အတူလာမည့်အဆင့်သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုယူသွားပါ!
ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဒီ app ကို Nielsen ရဲ့တီဗီ Ratings အဖွဲ့ကဲ့သို့စျေးကွက်သုတေသနကိုအထောက်အကူပြုရန်ထားတဲ့ Nielsen ရဲ့စီးပွားဖြစ်တိုင်းတာခြင်း software ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/mobile/us/en/optout.html ကြည့်ပါ ကျေးဇူးပြု.
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports အား အခ်က္ျပပါ
APK အေၾကာင္း Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.10.0
ထုတ်လုပ်သူ Twitch Interactive, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.twitch.tv/user/legal?page=privacy_policy
App Name: Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports
Release date: 2019-06-13 04:08:23
လက်မှတ် SHA1: 8C:68:C1:38:22:72:3A:2B:1F:A8:44:BE:D3:40:03:1B:EB:1F:94:63
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alec Lee
အဖွဲ့အစည်း (O): Twitch
Twitch: Livestream Multiplayer Games & Esports APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ